आकाशे पुलवाली - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
काठमाडौं । अचम्म लागिरहेको छ मलाई जुन कुराहरु मैले सुनेको मात्र थिएँ ,त्यो कुरा आफैले देखे र भोगे पनि ! कता ढल्कदै छ हाम्रो संस्कार ? कता मोडिदै छौ हामी नेपाली ? कता हराउँदैछन्,ती चाड पर्व एकादशी,पुर्णीमा र श्रावण महिनाभरी ब्रत बस्ने हाम्रा नेपाली दिदी बहीनीहरु ? खुलेयाम जवानीको मोल मोलाई हुन्छ यहाँ ,खुलेयाम बार्गेनिङग गर्ने गरिन्छ यहाँ महिलाको अस्मिताको !
खुलेयाम प्रस्ताव राखिन्छ यहाँ यौन तृष्णाको ! के सबैभन्दा ठुलो कुरा पैसा नै हो त ? कतिसम्म सामान्य बन्दै छ त यो जवानीको खेल ? म काठमाडौंको किर्तीपुर पांगा भन्ने ठाउँमा बस्छु । भर्खरको कुरा हो यो ! मेरो एक जना साथी बझाङबाट काठमाडौंका लागि आउन लाग्नु भएको थियो । हुन त दिउँसो १२ बजे नै आईपुग्ने समय हो कारण हाम्रो देशको बाटोको हालत र चक्काजाम तपाईलाई थाहा नै छ । म कोठामा थिएँ फोन आयो साथी म थानकोट आईपुगे तपाई बसपार्क आउनुस् मलाई लिन । म पनि हुन्छ भन्दै ढोका बन्द गरेर कोठाबाट बाहिर निस्कें ।
काठमाडौंमा मैले अस्ति भन्दा आजभोली बेलुकी पख जाडो बढेको अनुभव गरेँ मैले ,चिसो मौसम बसपार्कमा आकासे पुल नजिक पुगेर साथीलाई फोन गरे ,स्वयम्भुमा बस सामान झार्न लागेको छ रे अझै आधा घण्टा लाग्छ भन्नुभयो साथीले । म गोङ्गबुको आकासे पुल पुग्ने वेलामा कम्तिमा १५ जनाले मलाई क्रमशः दाई होटेल हो भनेर सोधे ? दाई केटी लाने भए पनि मिलाईदिन्छौं । पुलिसको पनि डर हुँदैन ,चिन्तै मान्नु पर्दैन हामी सब मिलाउँछौं भन्थे तर म हैन भन्दै तर्किरहे । अव आधा घण्टा के गर्ने ? म आकासे पुल चढ्न थाले । आकासे पुलको भर्याङ चढ्दै थिएँ ,त्यहाँ साईडमा तन्नेरीहरु जिस्कँदै थिए । मलाई पनि जाने हो भनी सोध्दै थिए ,म वास्तै नगरी भर्याङ चढिरहेँ । त्यत्तिकैमा माथि आकासे पुलको बिच भागतिर पुगेँ ।
चारैतिर हेरेँ उपत्यकामा लोडसेडिङ मुक्त भएपछि चारैतिर उज्यालो झिलीमिली देखिन्थ्यो । लोडसेडिङ नभए त उपत्यकामा बाह्रैमास दिपावली हुँदोरहेछ मैले मनमनै सोचिरहेँ । सडकतिर हेरेँ दिनभरी बाटो काट्न समेत फुर्सद नहुने यो सडक अहिले त अलि खाली खाली देखिन्थ्यो । मैले सोचे सायद राती पनि यस्तै यस्तै कारणका लागी परेको होला ,२४ सै घण्टा अस्तव्यस्त भईरह्यो र त्यति नै प्याक भइरह्यो भने अहिले त यस्तो छ ,यो सडकको हालत के हुन्थ्यो होला ? सायद यो सडकलाई पनि विश्राम चाहिने भएको हुनाले रात परेको होला । झिलीमिली बत्ती आफ्नै तालमा बलिरहेको थियो ,सबै आ-आफ्नो सुर तालमा थिए ,जसलाई अर्काको मतलब थिएन । कुर्दाकुर्दै रातीको नौ बजिसकेको थियो ।
म सोच्दै थिएँ ,अचम्म छन्, यी दृश्यहरु आ–आफ्नै तालका ! त्यत्तिकैमा कोही मेरो नजिकै आएजस्तो लाग्यो ,पुलुक्कै हेरे ,त्यस्तै २४,२५ वर्षकी देखिन्थी तर म त भर्खर २२ पुगेको थिएँ । उनले मलाई तरपनि दाई भन्दै सम्बोधन गरि बोलाईन । उनको अनुुहारमा पुलक्क हेरें,उनुहारमा कहीँ कतै यौवनको प्यास देखिएको थिएन । तर मैले बुझिसकेको थिएँ ,उनी मलाई यौन प्रस्ताव राख्न आएकी थिईन ,मलाई थाहा थियो । उनले सिधै भन्न सकिनन्, सायद यो लाईनमा उनी नयाँ जस्तो लाग्यो । के हेरिरहनु भएको उनले सोधिन ? अनि मैले जवाफ दिएँ केही पनि होईन । अनि माथिबाट हेरिरहनुभएको छ त तलतिर उनले भनिन् । मैले हँ हँ यतिमात्र भने त्यसपछि उनले मलाई मुखै फोरेर भनिन् मसँग जाने हो ? अनि मैले अलि नबुझे जस्तो गरेर जवाफ दिएँ ,कहाँ जाने ? उनले उत्तर दिईन होटेलमा ! मैले सोधे कुन होटेलमा जाने र ? उनले भनिन् ,मलाई के थाहा त केटा मान्छेले पो लाने हो त ?
त्यति भन्दा मलाई उनीसँग थप कुरा गर्न मन लाग्यो । अनि मैले सोधे , कति पैसा लिने ? उनले भनिन्,दुई हजार रुपैँया रातभरीको । अनि मैले भने मैले पाँच सय सुन्या छु नि त ? उनले भनिन् ,त्यो त बुढि मान्छेले लिने हो म त तरुनी छु त ? ए होर,मैले जवाफ दिएँ । अनि थप कुरा गर्न मन लाग्यो उनीसित अनि मैले सोधे घर कहाँ हो हजुरको ? उनले जवाफ दिईन ,किन चाहियो ? मैले फेरी सोधे भन्नु न भन्नु चिन जान गर्दा के बिग्रन्छ र ? उनले सिन्धुपाल्चोक भनिन् , अनि मैले सोधे ,यहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ ? बसुन्धारा उनले भनिन् । अनि मैले सोधे ,यहाँ कतिखेर आउनु भएको ? उनी झर्केझै गरी बोलीन ,ह्या के बोलिरा होला ? जाने भए जान्छु भन्नु नत्र जान्न भन्दे भैगोनी भन्दै उतापट्टि फर्किन । मैले उनलाई फकाउँदै भनेँ ,हेर्नुस्,चिनजान गर्दैमा कस्को के जान्छ र ?
आखिर फालेको टपरी त काम लाग्छ भन्छन् ,हामी पानी भोली कुनै दिन काम आउँला नी ! अहिले चिनजान गर्यो भने तपाईको मेरो सम्बन्ध यो आकासे पुलदेखि होटलसम्मको मात्रै त होईन नी । त्यति भनेसी उनले जवाफ दिईन ,अरु के छ बाँकी सोध्न ,सोध्नु न त ? यहाँ कतिखेर आउनु भएको म पहिलो मान्छे हो र मैले सोधेँ । उनले अलि झर्किलो र उत्ताउलो पारामा जवाफ दिईन , एक पटक त गएर आईसके ,फेरी उनको अनुहारमा हेरे यौवनको प्यास कहिँ कति देखिनँ थियो त केवल डर मात्रै ।
फेरी मैले सोधेँ ,हजुरलाई डर लागीरहेको छ हो मसँग बोल्दा ? उनले हाँस्दै जवाफ दिईन ,यस्तो लुतेसँग के को डर ? हुन न त म अलि पातलो भएर पनि होला अनि के त मैले सोधे ? ह्या तपाई पत्रकार हो कि क्या हो ?कति साधेको ? अहिले पुलिसले दुईचार लट्ठीले हान्छ ,अनि थाहा हुन्छ । उनी मसँग बोल्न अलि भm्याउ मानेझै गरी बोल्दै थिईन । तरपनि उनीसँग बोल्न म एकदम उत्सुक थिएँ ,थप प्रश्न माथि प्रश्न तेस्र्याईरहेको थिएँ ,त्यत्तिकैमा आकासे पुलमा केटा मान्छेहरु उनलाई नजर लगाउँदै थिए ,उनलाई इशारा गर्दै थिए,उनलाई बोलाउँदै थिए ,आफुसँग जान भनी तर उनी गईनन् । उनी म भएकै ठाउँमा उभिराखिन्,मैले भने यो काम गर्न अफ्ठ्यारो लाग्दैन ? उनले भनिन्,मेरो जिन्दगीको बारेमा कहानी लामो छ भाई ,कुनै अर्को दिन सुनाउँला ।
मैले सोधे ,अनि बिहे भयो कि नाइँ ? उनले हाँस्दै जवाफ दिईन ,मेरो छोरा त तपाई जत्रै भयो । अहिले १२ वर्षको भयो । अनि छोरी ८ वर्षको । मैले होर भनेँ । उनले लजाउँदै सानो छँदा बिहे भएको भनिन् । अनि मैले भनेँ, बुढा खोई तपाईको,उनले भनिन् किन चाईयो ? हाम्रो डिभोर्स भाको अहिले दुबई छ भन्ने सुन्दैछु ,अर्को बिहे गरेको छ रे ,दुईटा छोराछोरी छ रे भनिन् । फेरी प्रश्न गरे मैले ,किन गर्नु भएको त डिभोर्स ? उनले अलि रिसाँदै भनिन् ,मुर्दा जहिले पनि रक्सि खान्थ्यो ,जहिले पनि बाहिर,बाहिर हिँड्थ्यो ,बाहिर केटीसँग लाग्छ भन्ने सुनेको थेँ । मसँग कहिल्यै राम्रो व्यवहार देखाएन । जहिले झगडा जहिले झगडा अनि यत्तिकैमा डिभोर्स भयो । उनले उत्तर दिईन । उनी भावुक बन्दै गईन ,उनले भनीन् ,छुट्दाखेरी छोराछोरी दिन मानेन ,अनि गाउँमा बसेसी रुन मात्रै मन लाग्यो ।
माईतमा मात्रै कति बस्न ु? आफुले नौ महिना कोखमा राखेर जन्माएको सन्तान आफैसित नभएसी के गरी बस्नु भनेर गाउँकै दिदीसँग काठमाडौं आएँ । काठमाडौंमा म जस्तो दुःखीलाई अनि नपढेको मान्छेलाई कस्ले राम्रो जागिर दिन्छ र ? दिदी पनि यस्तै काम गर्नु हुँदो रहेछ म पनि यस्तै परेँ । कहिलेकाँही आफ्नो गाउँतिरको मान्छे देख्दा छाँगाबाट खसेझै हुन्छू ,यस्तै छ जिन्दगी ! धेरै पैसा कमाएर त्यसको अगाडी एउटा पक्की घर बनाउने सपना छ । अनि छोराछोरीलाई त्यहीँ राख्छु,राम्रोसँग पढाउने छु । त्यसले अहिले अर्को बिहे गरेपछि मेरो छोराछोरीको बिजोग भएको छ । धेरै कमाउने मेरो सपना हो भन्दै आँशु झारिन । म पनि निकै भावुक बनेँ । मैले भने किन रोको नरुनुस् ।
उनीसँग यस्तै यस्तै कुरा गर्दै थिएँ ,मनमा कता कता नरमाईलो लागिरहेको थियो । मुनितिर रोडमा मेरो साथी जस्तै मान्छे देखेँ मैले । झोला बोकेर लुखुर लुखुर हिँडिरहेको । यसो झट्ट फोन हेरेँ ११ पटक मिस्डकल आएको रहेछ साथी कै । प्रायः म कोठामा बस्दा फोन साईलेन्ट मोडमा हुन्छ । त्यही भएर यी आकाशे पुलवालीसँग कुरा गर्दा गर्दै समय गएको पत्तो भएन । हामी त्यहाँबाट कोठामा गयौं । साथी त लामो यात्रा गरेर आएकाले छिटै सुतिसक्नुभयो तर मलाई त्यही आकासे पुलवाली र उनका कुराले झलझली दिलाइरह्यो । मैले सोचे कति प्रतिसोचको भावना मान्छेमा अचेल । हरेक मान्छे गलत काम गर्न ईच्छुक नभएर विवश हुँदो रहेछ र पैसाको लागी जे पनि गर्न तयार हुँदो रहेछ । पैसा भनेको अचेल मान ,मर्यादा,ईमान,ईज्जत सब रहेछ । अव हरेक नाता के पैसाकै स्वार्थमा जोडिएलान् त ?